Iwulite Azụmaahịa Gị Site na Ntị Online | Martech Zone
Iwulite Azụmaahịa Gị Site na Ntị na ntanetị
Anyị nọ na saịtị dị na Tennessee na ụlọ ọrụ anyị na-enyere aka site na onye mmekọ na-echepụta ihe, Taddeus Rex. Labolọ nyocha Labour bụ ụlọ ọrụ America nke na-arụpụta ma kesaa mgbakwunye na nri na vitamin.
Laboratories na-eche eche adịla ihe karịrị afọ 25 - malite na ahịa katalọgụ ma na-agagharị ugbu a n'ịntanetị. Ebumnuche ahụ bụ nke ndị nwe ụlọ ọrụ a nyere iji nyere ndị mmadụ aka ka ahụike dịkwuo mma. Ha anọghị na nnukwu ụlọ ọrụ na-ere nri na-edozi ahụ, ha na-echebara ndị ahịa ha echiche.
Thaddeus ga - enyere ha aka ịrụ ọrụ ma nweta ozi pụrụ iche ha ga - - ma lee ihe atụ ịtụnanya ntị na ntanetị na otu o si enyere ha aka nyere ndị ahịa ha aka. Ha nọ na-ahụ ajụjụ ndị ọzọ na ntanetị na ndị na-ezigara na-abịa na nke ha nchịkọta na ndị ahịa na-achọ inweta Ihe mgbakwunye B12 maka nkịta na-ata ahụhụ site na nsogbu nri.
Kpọmkwem, okwu bụ Ezughị oke Pancreatic Exocrine, a na-agwụ ike ma sie ike ịchọpụta esemokwu na anụ ụlọ.
Exocrine pancreatic insufficiency (EPI) na - emebi ikike ụmụ anụmanụ nwere igwu ala na ịmịkọrọ nri ndị dị na nri. N'ihi enzymes nke digestive ezughi oke nke pancreas kere, nri na-esi na ahụ gafere n'ụzọ anụ ahụ apụtaghị nke ọma. Mụ anụmanụ nwere EPI na-eri nri n'ihi na ha enweghị ike iri nri site na nri ha na-eri. Via ụlọ nyocha PET lekọtara B-12 ™ usoro
Wonder Laboratories nwere onyinye B-12 mana ọ bụ maka ndị mmadụ, ọ bụghị anụmanụ. Ndị guzobere ụlọ ọrụ ahụ hụrụ ka ndị ahịa si na ntọala ntọala EPI wee rute obodo. Ha nwere ike iji ngwa ngwa rụọ ọrụ na ntọala EPI iji mepụta ngwakọta ngwakọta nke ngwaahịa B-12 kpọmkwem maka anụ ụlọ. N'ihi nke a, Laboratories na-eche ugbu a bụ onye na-eweta ihe mgbakwunye na-edozi ahụ maka anụ ụlọ.
Nke a bụ ihe atụ dị ịtụnanya nke nlekota ụzọ ntinye aka iji chọpụta ohere iji bulie azụmahịa gị. Naanị m chọrọ ịkekọrịta ihe atụ ngwa ngwa nke uru ọ bara ige ntị n'ịntanetị. Echere m na nke a bụ ihe atụ dị ịtụnanya nke otu ụlọ ọrụ si gee ntị, zaghachi, ma setịpụ ụzọ nkwụnye ego ọhụrụ. Ugbu a, Wons Labs na-eleba anya na nsogbu anụ ụlọ ndị ọzọ ebe mgbakwunye ha nwere ike ịba uru.
Tags: b-12Exocrine pancreatic enweghị ikePET iheanu ulotennesseeiju laboraturesiju labs